Ihe e dere n’ihe e dere n’iwu wire n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́, e ji egbochi n’ihe ndị na - egbochi n’ihe ndị na - egbochi n’ahụ́
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ebe ebe usoroiheomume>Ahụ ígwè a gbawụsa
E nwekwara ike ịkpa ígwè a na - agbawanye n’akwụkwọ, n’akwụkwọ n’akụkụ, n’akwụkwọ, n’akwụkwọ, n’akwụkwọ ọla, ọla, ọla, ọla, ọgwụ, na ihe ndị ọzọ. N’oge a, e nwere ọtụtụ ndị kpebiri iji ígwè a gbasakwuo dị ka ihe n’ihi ọdịdị ahụ mara mma. E wezụga nke ahụ, site n’ihe ndị dị n’ahụ́ n’ihe dị mma, kpọchie akụkụ nke anyanwụ, belata ụzụ ma mechaa mmiri ahụ, a pụkwara iji ya mee ihe n’ámá egwuregwu, n’ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nnukwu ihe ọkụkụ na ihe ndị ọzọ.
Iji Akụ̀ A Na - enweghị Mkpa
N’ihe ndị dị n’ihe ndị a na - akụkụ n’ebe a na - enweghị ntị, ihe ndị a na - akpọ n’akwụkwọ nickel.Nkọpụta nke a na-adị meta awanyerewanye
Mmadụ a na - agwọ n’elu: PVC a na - egbochi mmasị, a na - ekpo ọkụ, ọkụ eletrik a na - enwe ọkụ.
Nkà: 0.4 mm ruo 0.8 mm.
L Mesh ụhara: 8 × 16 mm, 10 × 20 mm, 2 × 25 mm, a pụrụ ịchọpụta nkọwa pụrụ iche.
Inyogo a gbawanye
Inyokpuru A Na - agbawanye Mpa
Ọ dị mma otú e si eme ihe ọhụrụ na nke a na - achọ mma.Akụkụ ndị e nwere n’ihu ígwè ndị a na - agbawụ
Mmadụ n’ike magburu onwe ya.
M na - egbochi anyanwụ iji anya mmadụ ìhè.
Ịma ọkụ ahụ́, a na-agwurughị.
Ị na - emelata ụzụ ma mechaa mmiri ahụ.
Mụ na - ebu ibu, nke dị mfe iwepụta.
Usoro ihe omume nke a na - agbawanya
A na - eji ihe a na - agbawanye n'ụzọ nile eme ihe dị ka ụlọ ahịa na ụlọ ndị a na - azụmahịa na ụlọ nkịtị dị ka ámá egwuregwu, ụlọ ụlọ ọrụ, Ọkụkụ nnukwu na ihe ndị ọzọ.
Ụdị ígwè a na - agbawanye n’ụlọ n’ọfịs
Ụdị ígwè a na - agbawanye n’ụlọ a na - ewu n’ahụ́
Ochie:Ụzọ n’Ụlọ Ọkụ
Ọzọrụ:Ụzọ a na - achọ n’azụ
Mwagụ̀ metal grid panels, wire mesh panel, expanded metal facade,
Ịgba na - akpata na ihe ngwọta nke paneel egwu ígwè egwú
1. N’usoro ọkụ n’ahụ́,Metal grịa paneelụA na - apụghị ịhụ anya n’okpuru oké ọkụ nke asid na alkali, karịsịa ụfọdụ ntakịrị akpụkpọ akpụ, bụ́ ndị dị mfe ịkpọsa, na-esa ya sitere n'ahụ́ n'akụkụ akụkụ, bú...
IHE NDỊ NA - AKỤRỤ IHE NDỊ NA - AKỤRỤ MMADỤ MMADỤ, ỊGWỤ NA ỊGWỤ
Ụdị ígwè a na - agbasa, Site na ndokwa mmepe n'oyi atọ, na - enye ọkụ n'oge a na-adị mma nke a na-adị ya. N’ụzọ dị otú a, ghọtara ụkpụrụ ndị a na - enwe mmasị n’ebe ụlọ ahụ. Na - atụ anya mmetụta dị i...
Ihe e dere n’ihu 8 n’ahụ́
Ahụ ígwè a gbawụsaIwu 8:1. Zere iji ígwè ahụ a na - agbawanye n’ọdịnihu dị ka ụdị ọdịdị nke na - ekwekọ n’ahụ́ nke dị adị. Iji mee otú ahụ, ọ dị mkpa ka ihe atụmatụ ahịa a gbawanyere ya na akụkụ ndị ọ...
3D Wire Mesh Paneel ntị
3DUme yaInwe ntị N’ihi paneelụ ndị na - ebu ume dị elu ya na - egwe n'ihi usoro owu ụlọ nke a na-enye 3D A pụrụ iji paneel iji mgbidi na ụlọ n’elu ụlọ. Ukwu mgbanwe nke ewu maka ụlọ ebe obibi na ...
Otú ị ga - esi meziwe paneel egwú
Paneel n’ahụ́ n’ahụ́ bụ ụdị ihe e ji akpụ n’akụkụ n’etiti ahụ site n’ígwè a na - ese ma ọ bụ ụgwọ ọkụ. A na - eji paneel ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, mkpụrụ osisi akpụ, n’obodo ụkwụ nke ube akpụ, nr...
Ịgwọ ọrịa a na - arịa ọsọ
Nsogologo paneelụỌgwụgwọ ọnụ ọgụgụ n’ụlọ owuwu:(1) A kwesịrị ịghọta ọnọdụ nke ụlọ owuwu ihe dị ka a na - achọ atụmatụ na nkà ụlọ owuwu tupu i wụsịrị. E kwesịrị ịna - emekọ ihe n’ebe a na - eme n’ebe a...